- Hevitra marika -
Ny lanjan'ny teknolojia mandroso dia mitoetra amin'ny fampiharana sy ny fampiharana. Fitsaboana ara-pahasalamana, indostria mifandraika ary fangatahana arecomplex sy isan-karazany, ary ny fampiharana teknolojia dia manana signifi-cance lehibe kokoa. Raha ny fahazoana ny fahatakarana lalina ny fanamby sy ny fahasahiranana atrehin'ireo mpanjifantsika dia afaka mitana andraikitra lehibe kokoa sy manome lanja ny mpamatsy ho an'ny mpanjifanay amin'ny fotoan-tsarotra
AKF dia manolo-tena hampihatra ny haitao mandroso sy matotra indrindra-
ny nologie mora azo hamahana ny olan'ny mpanjifa sy hampiroborobo ny fampidirana fitsaboana sy fitsaboana ara-pahasalamana. Tsy dodona ny handefa izany izahay
teknolojia, saingy voalohany indrindra, manana fahatakarana lalina momba ny mpanjifa isika, ary miezaka mitady vahaolana tena mahomby izay mampifangaro ireo filàna amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy ary manana fahalalahana amin'ny fampandrosoana.
AKF dia manohy mampitombo ny fampiasam-bola R & D, mazàna matotra foana ary ny teknolojia mitarika, ary ny matihanina
ekipa mihainoafaka marina ampidiro ny loharanom-pahalalana isan-karazany, ary ampiharo ny fanavaozana araka izay takiana, manomemitohy
serivisy fanaraha-maso ary haingana hamaly ny mpanjifa prob-lems, ary mihalehibe miaraka amin'ny mpanjifa.
Ny fangatahan'ny mpanjifa no hery manosika ny fivelaranay, mifikitra amin'ny mpanjifa-centrista izahay,zon'ny fangatahan'ny mpanjifa ary manome serivisy effec-tive ho an'ny mpanjifa.
Fahamarinana sy fahatokisana
Efa vita. Ny fahamendrehana dia tsy azo zahana amin'ny orinasa iray.
Mandresy hatrany izahay mpanjifa mahatoky hatrany miaraka amin'ny tsy fivadihana.
MPISAVA LALANA SY MAMONJY
Raha tsy afaka manaraka ny fiovan'ny fotoana isika dia hijanona ny orinasa. Fanavaozana, fisainana vaovao mpisava lalana, fomba vaovao ary zava-bita vaovao dia mandroso hatrany.
Mampihatra mafy ny rafitra fitantanana kalitaon'ny QMS izahay ary manome antoka ny kalitaon'ny prod-cts amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola R & D, famokarana hentitra, fenitra manara-penitra, fanamafisana ary fanamarinana.
Ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa dia ny fifaninanana. Ny ekipa dia miorina amin'ny fototry ny famenony sy ny fiaraha-miasa ary ny sampana dia miara-miasa, mifototra amin'io toe-javatra io, ny fahombiazan'ny asa sy ny fahaiza-mitan'ny orinasa dia azo hatsaraina.